कुन मुलुकसँग कति सुपरकम्प्युटर ?
सुपर कम्प्युटर भन्नेबित्तिकै विशेष काम गर्ने शक्तिशाली कम्प्युटर भन्ने हामी बुझ्छौं । आधुनिक विश्वको विकासका लागि सुपरकम्प्युटर निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले अहिले धेरै मुलुक यसको विकास तथा विस्तारमा अघि बढिरहेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि जगत्मा सुपरकम्प्युटर अत्यावश्यक साधनको रूपमा प्रयोग...
नासाले खोज्यो ‘सुपर–अर्थ’
नासाका वैज्ञानिकहरूले जीवनको सम्भावना हुन सक्ने विशेषता भएको पहिलो ग्रह खोजेका छन् । सौर्य मण्डलभन्दा बाहिर भेटिएको यो ग्रह पृथ्वीभन्दा ३१ प्रकाशवर्ष टाढा रहेको छ, जसलाई ‘सुपर–अर्थ’ जीजे ३५७–डी नाम दिइएको छ । यो ग्रहको खोजी नासाको स्याटेलाइटबाट गरिएको हो । नासाको ट्र...
आगामी महीना आईफोन–११ सार्वजनिक गर्दै एप्पल
अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले आगामी सेप्टेम्बरमा आफ्नो नयाँ आईफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आईफोन ११ सँगै नयाँ आईप्याड र म्याकबुक ल्याउने भएको हो । एप्पल निकट विश्लेषकहरूका अनुसार आईफोन ११ मा एप्पल पेन्सिलको समेत प्रयोग गर्न मिल्नेछ । यो व्यवस्था भएमा एप्पल पेन्सिल सपोर्ट गर्ने यो पह...
यस्तो छ विश्वकै सबैभन्दा सानो ल्यापटप
एक युवाले विश्वको सबैभन्दा सानो ल्यापटप निर्माण गरेका छन् । पोल क्लिन्गर नामका युवाले १ इन्चको स्क्रिन भएको विश्वकै सानो ल्यापटप बनाएका हुन्, जसलाई उनले ‘थिंक टाइनी’ नाम दिएका छन् । यो ल्यापटप आईबीएम कम्पनीले तयार पारेको थिंकप्याडको सानो रूप हो । अहिले थिंकप्याड अहिले लेनोभोले बनाउँछ । क...
आईटी ल्याब स्थापना : रू. ३ अर्बको ठेक्का ओबीसीआई कम्पनीलाई दिने तयारी
युवराज बस्नेत काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा देशभरका झन्डै १ हजार सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आईटी ल्याब) बनाउन ओसीबी कम्पनीलाई ठेक्का दिने भएको छ । प्राधिकरणले खोलेको टेन्डर प्रस्तावमा तीन कम्पनी उक्त ल्याब बनाउन इच्छुक देखिएका थिए, जसमा ओबीसीआई, म्याक्स...
अवैध फोनको आयात र प्रयोग रोक्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको आयात र प्रयोग रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल मोबाइल वितरक संघको शुक्रवार आयोजित तेस्रो वार्षिक साधारणसभामा उनीहरूले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा संसद्को प्रविधि तथा विकास समिति सभापति कल्याणी खड्का (नेकपा)ले नेपालमा &l...
यी हुन् फाइभजी इन्टरनेट प्रयोगका समस्या
फाइभजी इन्टरनेट अहिले प्रविधि जगत्मा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत केही देशमा त यसको आंशिक प्रयोग शुरू भइसकेको छ । गत शुक्रवार मात्र चिनियाँ कम्पनी हुवावेईले शन्चन शहरमा फाइभजी फोनको व्यावसायिक प्रयोग थालेको छ । विश्वभर नै फाइभजी इन्टरनेट सेवा विस्तारका प्रय...
बढी मोबाइल चलाउनेलाई मोटोपनको खतरा
पछिल्लो समय मोटोपनबाट पीडित मानिसको संख्या विश्वभर बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । मोटोपन रोग नै नभए पनि यो विभिन्न रोगको कारण बन्ने सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । त्यसैले शरीरको तौल वा मोटोपन बढ्नु मानिसका लागि टाउको दुखाइ हुने गरेको छ । मोटोपन मानिसको जीवनशैलीसँग सम्बन्धित समस्या...
विद्यार्थी लक्षित ‘स्मार्टर’ एप : गणित र विज्ञान विषयमा सहयोगी
काठमाडौं । विद्यार्थीको अध्ययनमा सघाउने उद्देश्यले म्याक्स कनेक्टरले ‘स्मार्टर’ नामक मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले कक्षा ४ देखि ९ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर उक्त एप ल्याएको हो, जसमा हाल गणित र विज्ञान विषय अध्ययन गर्न सकिनेछ । विद्यार्थीले विद्यालयबाहिर पनि मोबाइल वा ट्...
चन्द्रमामा पहिलोपटकमहिला पठाउँदै नासा
चन्द्रमामा मानिसले पाइला टेकेको ५०औं वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले पहिलोपटक महिलालाई चन्द्रमामा पठाउने योजनामा काम गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमलाई ‘आर्टेमिस’ नाम दिइएको छ । नासाका अनुसार अहिले अघि सारिएको योजना आगामी दिनमा मंगल ग्रहका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण ह...